Indlela ukuhlobisa ikhekhe nge-mastic: esisebenzayo
Mhlawumbe umuntu uthanda ukudla akuyona kuphela esiphundu, kodwa futhi ezikhangayo. Lokhu kusebenza futhi holide izitsha, kanye nama-dessert, ezifana amakhekhe. Enye indlela esiyishisekela ngayo ukusetshenziswa umhlobiso confectionery mastic esekelwe - ushukela abavamile powder ne ukwengeza izithako ezihlukahlukene kakhulu futhi ezingalindelekile ezifana marzipan, gelatin, amaprotheni, isitashi lwebhece. Kukhona izindlela eziningi ekuwulungiseleleni, ngalinye elikwazi ulula. Kodwa kanjani ukuhlobisa ikhekhe nge-mastic? Ngoba phakathi kwethu kukhona labo abakuzwile lokho kunzima ngempela. Asivume.
Okokuqala, ungakhathazeki. Akuwona wonke umuntu uyakwazi kwesokudla okokuqala ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi Eqinisweni lokho Confectioners nabanye abantu zidlule izifundo ezikhethekile. Uma ungaqiniseki ngokuphelele ngokwabo kanye nemandla abo Culinary, kuqala zifezeke indlela ukuhlobisa ikhekhe nge-mastic ku amabhisikidi ezincane kanye esincane kakhulu. Ngakho nabete isandla.
Okwesibili, ukufunda izindlela kwe-mastic. Amakhulu kubo - kusukela elula kuya ezihlotshisiwe. Ngalunye oluphilayo, ngasendleleni, kungase kahle kwi esiqandisini amasonto amabili futhi ngisho afika kwamane efrijini. Vele ubeke unama yakho esikhwameni ngepulasitiki futhi kwaphela isikhathi esithile mayelana nokuphepha yayo ungakhathazeki. Kodwa ungashiyi yakhe isikhathi eside emoyeni: ngakho-ke seyomile. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ekulungiseleleni ushukela oluyimpuphu udinga kancane ezingaphezu kuka ezishiwo iresiphi. Yena luqobo kufanele abe engajulile.
Okwesithathu, lapho nokunamathisela usulungile, wenze amabhisikidi ngokuba ikhekhe. Ngemuva ukubhaka, basibekela ubuso ibhotela ukhilimu, ganache noma marzipan. Lesi sakamuva kumele kube isikhathi esithile kule esiqandisini ukuze kuphole kahle. Manje ungakwazi ukuhlobisa ikhekhe nge-mastic.
Kala kuvuna amabhisikidi yakho. Donsa ukuze uqale mastic efrijini. Qala ukuthi unikezele, abafafazwe ugingqe iphini nethebula isitashi, enikeza ifomu engenalutho ikusasa ikhekhe. Uma ungalilahli, ukubeka imizuzwana embalwa e-microwave oven - ngakho-ke iba futhi plastic.
I ububanzi workpiece kusukela mastic ungakwazi ukukwenza kufanele kulingane ububanzi plus ezimbili isipanji ikhekhe nobude Imininingwane kwenye 5 amasentimitha (i engavamile futhi amajika). I ukujiya elikhulu workpiece - 5-6 amamilimitha angu.
Ngemva kweqa le-mastic ukudluliswa ezifanelekile ikhekhe, kuqala esehlanganise it nge ifilimu, okufanele phezu workpiece emva ukudluliswa. Lokhu kwenziwa ukuze ulolonge uhlevane kamuva spatula ekhethekile.
Iphela kanjalo iminyaka ingxenye eyinhloko inqubo ebizwa ngokuthi "indlela ukuhlobisa ikhekhe nge-mastic." Kodwa kukhona ezinye izinto kancane. Ngokwesibonelo, ukunikeza wokuvuna ukukhanya, ungakwazi alisibekele ingxube likagologo nezinyosi (50 kuya ku-50).
Indlela ukuhlobisa ikhekhe ngokuphelele? Sebenzisa izibalo kusukela ze-mastic. Khumbula nje ukuthi badinga ukulungiselela kusengaphambili nokuthi ziphephile ngosizo iqanda omhlophe phambi nje ukugcwalisa dessert etafuleni. Umbala unikezwa kubo ngosizo udayi ezinemibala, okuyinto ezifuywa ngamanzi.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukuhlobisa ikhekhe nge-mastic. Inhlanhla futhi thokozela ukudla kwakho!
Indlela Fry inkukhu esihlwabusayo epanini: abathandi amathiphu
"Alfagan" (ngeso amaconsi): Yokusetshenziswa nempendulo
Izindawo ebhasini: isikimu. Indlela ukukhetha indawo ephephile gumbi?
Isifingqo kanye nokubuyekeza yencwadi "ethi Alice in Wonderland" Lewis Carroll
Ukusetshenziswa opopayi ekuthuthukiseni zezingane
Ngazi kanjani cores amaningi indlela kukhompyutha processor kanjani
Corner iziko ngezandla zakhe: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo (isithombe)
I ngiyisiphukuphuku nokunqoba yayo
"Penoplex Nenduduzo ': ezibekiweko lobuchwepheshe, izakhiwo, izicelo